Famindram-pitantanana teo amin'ny ministeran'ny Raharaham-bahiny | Primature
Mahazoarivo, ny 30 janoary 2020 – Tontosa androany maraina tao amin’ny foiben’ny ministeran’ny Raharaham-bahiny ny famindram-pitantanana teo amin’ny Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, izay nitantana vonjy maika an’ity ministera ity, sy ny minisitra vaovao, Tehindrazanarivelo Djacoba Liva, voatendry tamin’ny didim-panjakana laharana faha 2020-70.
Naneho ny fahovononany amin’ny hanamafisana orina ny diplaomasia Malagasy ka nanamafy fa tsy handraraka ilo mby an-doha amin’ny andraikitra ankinina aminy Andriamatoa Tehindrazanarivelo, ary nankasitraka ny Praiminisitra tamin’ny fitantanana ny ministera.
“Araka ny voalazan’ny Filohan’ny Repoblika dia ny fahaiza-manao sy ny fitiavan-tanindrazana no mibaiko ny rehetra mba hahafahantsika mifarimbona sy mifameno amin’ny fampandrosoana ny firenena ». Io no nambaran’ny Praiministra Ntsay Christian ary nanararaotra nampita fiarahabana ho an’ny mpikambana ao amin’ny governemanta sy fisaorana ho an’ny Filohan’ny Repoblika ny tenany. Nambarany fa taorian’ny rotsak’orana niseho teto amin’ny firenena dia tsapa fa misy ny fanararaotana ka laharam-pahamehan’ny governemanta amin’izao fotoana izao ny hifehezana ny fiakaran’ny vidin’entana. Noho izany dia tsy maintsy hisy fandraisana andraikitra haingana eny anivon’ny ministera rehetra. Ny faharoa, hoy izy, dia ny fanarenana an’ ireo fotodrafitrasa simba toy ny tetezana sy ny lalana mba hamerenana amin’ny laoniny, ao anatin’ny fotoana fohy, ny fampiasana ny lalam-pirenena rehetra.
Mikasika ny governemanta manokana dia notsindriany fa manoloana ny vina napetraky ny Filohan’ny Repoblika, sy ny politika ankapoben’ny fanjakana, dia mila miasa haingana ireo minisitra ary mitohy hatrany ny tombana izay miainga avy amin’ny fanaraha-maso ny fahatanterahan’ny fifanarahan’asa mandritra ny herintaona, amin’ny alalana tondron-tsivana maromaro. Tafiditra ao anatin’izany koa, hoy ihany izy, ny fitakiana ny fahaiza-miaina ao anatin’ny fahamendrehana amin’ireo minisitra tsirairay avy.
← Fanarenana ny Faritra Alaotra Mangoro
Fitsidihana ny faritra avaratr’i Madagasikara →
Fankalazana ny faha 150 taonan’i Mahatma Gandhi